တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 4, 2007 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 1, 2015 Douglas Karr
ဂူဂဲလ် Analytics တွင်ကောင်းမွန်သောအင်္ဂါရပ်တစ်ခုရှိပြီးသင်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာအတွင်းရှိရှာဖွေမှုများကိုခြေရာခံနိုင်စွမ်းရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် WordPress ဘလော့ဂ်တစ်ခုဖွင့်ထားပါကရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှိသည် Google Analytics ဆိုက်ကိုရှာပါ:
သင်၏ဆိုဒ်ကို Google Analytics မှရွေးချယ်ပြီးတည်းဖြတ်ကိုနှိပ်ပါ။
View Settings ကိုနှိပ်ပါ။
ဆိုက်ရှာဖွေခြင်းချိန်ညှိချက်များအောက်တွင်ဆိုဒ်ရှာဖွေခြင်းလမ်းကြောင်းကို ON ဟုသတ်မှတ်ပါ။
Query Parameter အကွက်ထဲတွင်“ term, search, query” စသည့်အတွင်းပိုင်း query parameter ကိုသတ်မှတ်သည့်စာလုံးသို့မဟုတ်စကားလုံးများကိုရိုက်ထည့်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံစကားလုံးသည်“ s” သို့မဟုတ်“ q” ကဲ့သို့သောစာတစ်စောင်မျှသာဖြစ်သည်။ (WordPress သည်“ s”) parameter ၅ ခုအထိကိုကော်မာဖြင့်ခွဲခြားပါ။
သင်၏ Google Analytics မှသင်၏ URL မှ query parameter ကိုဖယ်ရှားလိုခြင်းရှိမရှိကိုရွေးချယ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်ပေးထားသော parameters များကိုသာဖယ်ပေးပြီး၊ URL တူညီသောအခြား parameters များကိုသာဖယ်ရှားပေးသည်။
Tags: google analytics site ရှာဖွေခြင်းgoogle site ရှာဖွေခြင်းကွန်ရက်ရှာဖွေရေးwordpress ရှာဖွေရေး
သောကြာနေ့မှာငါ TechPoint ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုတက်မယ်
5:2007 pm မှာနိုဝင်ဘာ 2, 31
5:2007 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 44
Nice တစျ, Doug! ဒီဟာကိုရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမသိဘူး
11:2010 pm တွင်သြဂုတ်လ 12, 05
အကြံပေးချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီရက်အနည်းငယ်အကြာမှာဒီဟာကို install လုပ်ပြီးရှာဖွေရေးနေရာကိုမသေချာဘူး၊ ဘာကြောင့်အစီရင်ခံရသေးတာလဲလို့တွေးမိတယ်။ သင်နှစ် ဦး စလုံးကိစ္စများကိုင်တွယ်!
8:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 57
သတင်းအချက်အလက်အတွက် Cool ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ 🙂
SiteMeter plugin လည်းရှိတယ်။ ဘယ် blog နဲ့ဘယ်နှစ်ခါရှာပြီလဲဆိုတာကြည့်နိုင်တယ်